Puntland oo diyaarisay kooxo talaala caafimaadka xoolaha reer guuragga ah. – Radio Daljir
Puntland oo diyaarisay kooxo talaala caafimaadka xoolaha reer guuragga ah.
Maajo 19, 2013 6:22 b 0
Garowe?19-May.Wasaaradda xanaanadda xoollaha iyo? beeraha Puntland ayaa kulan ay saakay ku qabtay maggaaladda Garoowe waxaa ay kusoo bandhigtay koox dhakhaatiir ah oo loodiraayo talaalka xoolaha kunool deeganadda Puntland.
Kulanka oo goob joog ayka ahayeen masuuliyiin katirsan Dowladda Puntland oo uu ?kamid yahay Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland wasiirka wasaradda xanaanadda xoolaha iyo wasiirka warfaafinta ayaa waxaa waheliyey masuuliyiin kasocdey hay?addaha kashaqeeya hormarinta bulshadda Puntland oo ay kamid tahay hay?adda FOA.
Wasiir k/xigeenka ?wasaaradda xaananadda xoolaha ?Cabdi wali Xirsi Nuur oo goobta ka hadlay ayaa sheegey kooxdaa dhakhaatiirta ah oo gaaraya 20- xubnood inay wasaaraddu diyaarisay kadib markii ay aragtay baahida looqabo waxaana ay tagidoonan dhamaan deegganadda Puntland? waxaana ay xoolaha ka talaalidoonan xanuunadda kala ah Furuqa iyo Jadeecada.
Idle Maollim Omar
Radio Dajir Somalia
Dowlladda Soomaaliya oo war-saxaafaddeed kasoo saartay joojintii duulimaadka Qarammadda middoobey ee Hargeysa
Ururada siyaasadda Puntland oo bilaabay furitaanka xafiisyada goboladda iyo degmooyinka.